တော်လှန်ရေးကာလအလွန်လ တိုင်းပြည် ဘယ်လို ပြန်ထူထောင်မလဲ ဆိုတာကို ပူနေသူများသို. ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေ ပိုချမ်းသာလာမှာ….) - CeleHits
ကျနော်တို. နိုင်ငံက စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတာဆိုတော့ တောင်သူလယ်သမားတွေလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ရင် တိုးတက်တာ မြန်ပါမယ်။
တောင်သူလယ်သမားတွေ ငွေရွှင်ရင် မြို.ကလူတွေလည်း စီးပွားဖြစ်ဖို. ပိုသေချာတယ်။
တောင်သူလယ်သမားတွေ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးဖို. အောက်ဖက်မှာ နည်းပညာတချို.ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုတာ ပြည်သူတွေ သိအောင် ပြောပြပေးတာပါ။ မအလတို. အဖွဲ.က ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ဒီနည်းပညာက မြေကြီး လုံးဝ မပျက်ပဲ သီးထွက်တိုးတာ၊ ပိုး နဲ. မှီုရောဂါတွကို နိုင်တာ၊ ပိုးသတ်ဆေး သုံးစရာမလိုတော့လို. စက်နဲ. စစ်တဲ့ အခါ Reject အဖြစ်မခံရတော့တာ၊ စားသုံးသူကို ဘာဥပဒ်မှ မဖြစ်စေတာ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ. ပြည့်စုံပါတယ်။
မြန်မာပြည် အနှံ. စမ်းသပ်ချက်တွေအရ အောက်ပါအတိုင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရထားပါတယ်။
၁) ဖရဲသီးကို ပိုချိုစေပါတယ်။
၂) တစ်ဧကကို စပါးတင်း ၅၀ မပြည့်တဲ့ လယ်တွေမှာ တင်း ၉၀ အထိ ထွက်တဲ့ အပြင် အချိန် ၂ ပတ်လောက် စောမှည့်ပါတယ်။
၃) ကုလားပဲ စိုက်ခင်းတွေမှာ စမ်းတာ မှာ မျိုးစေ့ ကြဲတာ နည်းတဲ့ အကွက်က မျိုးစေ့ ပိုကြဲတာ များတဲ့ အကွက်ထက် အထွက်နှုန်း သိသိသာသာ ပိုထွက်ပါတယ်။
၄) အပင်တွေကို ခရုတွေ၊ ဂဏန်းတွေ လာကိုက်တဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၅)မတ်ပဲ စိုက်တာ အပင်သေတာ များပြီး မျိုးပြန်ရဖို. ခက်တဲ့ မြေဆိုးမှာ တစ်ဧကကို တင်း ၂၀ အထိ ထွက်ပါတယ်။
၆) သရက်ပင်မှာ အသီး ပိုတင်စေပါတယ်။
၇) စတော်ဘယ်ရီကိုလည်း အသီးတင်ပြီး အထွက်တိုးစေပါတယ်။
၈) လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသီး စတဲ့ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးပင်တွေမှာလည်း အလုံးကြီးပြီး အထွက်တိုးစေပါတယ်။
၉) ထွက်တဲ့ဗူးသီးက ဗူးသီးခြောက်ပဲ လုပ်လို.ရတဲ့ မြေကြီးမှာပဲ စားလို.ရတဲ့ ဗူးသီး အကြီးစားတွေ ထွက်စေပါတယ်။
၁၀) မုန်ညင်းကို တစ်လ စိုက်မှ စားလို.ရတဲ့ အဆင့်ကို နှစ်ပတ်နဲ. စားလို.ရတဲ့ အဆင့် ရောက်စေပါတယ်။
၁၁) သရက်ကိုင်းတွေကို ကျိုးကျတဲ့ အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ပိုးကို ပြေးစေပါတယ်။
၁၂) ကြက်သွန်နီကို အလုံးကြီးတာ မြန်စေပါတယ်။
၁၃) ကြက်သွန်ဖြူ တစ်လုံးဥတွေကို တစ်လက်မ အထိ ကြီးစေပါတယ်။
၁၄) ငရုတ်ပင်တွေကို အညှာခိုင်ပြီး အထွက်တိုးစေပါတယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ ကျနော်လည်း မမှတ်မိတော့လို. ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေ။
အထက်ပါ အောင်မြင်မှုတွေကို ကျနော် အသေအချာ သိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်ကပဲ အစအဆုံး တီထွင်ထားတာပါ။ ဘယ်သူဆိုတာတော့ အမည်မဖော်ပြပါရစေနဲ.။
သိတဲ့သူများ ကိုလည်း လျှို.ဝှက်ပေးထားပါလို. မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ အချိန်တန်လို. ပေးသိဖို. လိုလာရင်တော့ သိကြရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် နည်းပညာဆိုတာ ၁၀၀ % သေချာပါတယ်။ မအလ ပြုတ်ကျပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်တဲ့ အချိန်မှာ ကူညီပေးဖို. စဉ်းစားထားပါတယ်တဲ့။
ဒီပညာရှင် ကူမယ်ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုတော့ မအလ ကို အပြုတ်တိုက်ဖို.သာ အားထည့်ထားကြပါလို. မြန်မာပြည်ရဲ. လူဦးရေ အများဆုံး တောင်သူလယ်သမားများကို တိုက်တွန်းပါရစေ။
တ္လေွာန်ရေးကာလအလြန္လ တိုင်ျးပည် ဘယ္လျိုပန္ထူထောင္မလဲ ဆိုတာကို ပူနေသူမ်ားသို. ( စိုက္ပ်ိုးမြေျးမူရေးလုပ်နေတဲ့သူတြေ ပိုခ်မ်းသာလာမွာ….)
က်န္တောို. နိုင်ငံက စိုက္ပ်ိုးရေးကို အျေခခံတာဆိုတော့ တောင်သူလယ်သမားတြေလိုအပ္ခ်က်တြေကျိုဖည့္စည်းပေးနိုင်ရင် တိုးတက္တျာမန္ပါမယ်။
တောင်သူလယ်သမားတြေ ငြေရွှင်ရင် မြို.ကလူတြေလည်း စီးပြာျးဖစ္ဖို. ပိုသေခ်ာတယ်။
တောင်သူလယ်သမားတြေ လိုအပ္ခ်က်တြေကျိုဖည့္စည်းပေးဖို. အောက္ဖက္မွာ နည်းပညာတခ်ို.ကျိုမန္မာနိုင်ငံက ပိုင္ဆိုင်ပြီးပြီဆိုတျာပည်သူတြေ သိအောင်ျေပျာပေပးတာပါ။ မအလတို. အဖြဲ.က ပိုင္တာ မဟုတ္ဘူးနော်။
ဒီနည်းပညာကျေမကြီး လုံးဝ မပ်က္ပဲ သီးထြက္တိုးတာ၊ ပိုး နဲ. မှီုရောဂါတြကို နိုင္တာ၊ ပိုးသတ်ဆေး သုံးစရာမလိုတော့လို. စက္နဲ. စစ္တဲ့ အခါ Reject အျဖစ္မခံရေတာ့တာ၊ စားသုံးသူကို ဘာဥပဒ္မွ မျဖစ်စေတာ စတဲ့ အက်ိုးကေ်းဇူးတြေနဲ.ျပည့္စုံပါတယ်။
ျမန္မျာပည် အနွံ. စမ်းသပ္ခ်က်တြေအရ အောက္ပါအတိုင်း အောင်ျမင္မှုတြေ ရထားပါတယ်။
၁) ဖရဲသီးကို ပိုခ်ိုစေပါတယ်။
၂) တစ်ဧကကို စပါးတင်း ၅၀ မျပည့္တဲ့ လယ်တြေမွာ တင်း ၉၀ အထိ ထြက္တဲ့ အျပင် အခ်ိန် ၂ ပတ်လောက် စောမွည့္ပါတယ်။
၃) ကုလားပဲ စိုက္ခင်းတြေမွာ စမ်းတာ မွာ မ်ိုးစေ့ ကြဲတာ နည်းတဲ့ အကြက္က မ်ိုးစေ့ ပိုကြဲတာ မ်ားတဲ့ အကြက္ထက် အထြက္နှုန်း သိသိသာသာ ပိုထြက္ပါတယ်။
၄) အပင်တြေကို ခရုတြေ၊ ဂဏန်းတြေ လာကိုက္တဲ့ အန္တရာယ္ကေန ကာကြယ်ပေးပါတယ်။
၅)မတ္ပဲ စိုက္တာ အပင်သေတာ မ်ားပြီး မ်ိုျးပန်ရဖို. ခက္တဲ့ျေမဆိုးမွာ တစ်ဧကကို တင်း ၂၀ အထိ ထြက္ပါတယ်။
၆) သရက္ပင္မွာ အသီး ပိုတင်စေပါတယ်။
၇) စေတ္ဘာယ်ရီကိုလည်း အသီးတင်ပြီး အထြက္တိုးစေပါတယ်။
၈) လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသီး စတဲ့ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးပင်တြေမွာလည်း အလုံးကြီးပြီး အထြက္တိုးစေပါတယ်။
၉) ထြက္တဲ့ဗူးသီးက ဗူးသီျးေခာက္ပဲ လုပ္လို.ရတဲ့ျေမကြီးမွာပဲ စားလို.ရတဲ့ ဗူးသီး အကြီးစားတြေ ထြက်စေပါတယ်။
၁၀) မုန်ညင်းကို တစ္လ စိုက္မွ စားလို.ရတဲ့ အဆင့္ကို နွစ္ပတ္နဲ. စားလို.ရတဲ့ အဆင့် ရောက်စေပါတယ်။
၁၁) သရက္ကိုင်းတြေကို က်ိုးက်တဲ့ အထိ ဒုက္ခေပးတဲ့ ပိုးကိုျေပးစေပါတယ်။
၁၂) ကြက်သြန္နီကို အလုံးကြီးတျာမန်စေပါတယ်။
၁၃) ကြက်သြန်ျဖူ တစ္လုံးဥတြေကို တစ္လက္မ အထိ ကြီးစေပါတယ်။
၁၄) ငရုတ္ပင်တြေကို အညှာခိုင်ပြီး အထြက္တိုးစေပါတယ်။
က်န္တာတြေကေတာ့ က်န္လောည်း မမွတ္မိတော့လို. ဒီလောက္ပဲျေပာပါရေစ။
အထက္ပါ အောင်ျမင္မှုတြေကို က်နော် အေသအခ်ာ သိသေလာက်ျမန္မာနိုင်ငံသား ပညာရွင္ကပဲ အစအဆုံး တီထြင္ထားတာပါ။ ဘယ်သူဆိုတာတော့ အမည္မဖော်ျပပါရေစနဲ.။
သိတဲ့သူမ်ား ကိုလည်း လွ်ို.ဝွက်ပေးထားပါလို. မေတ္တာရပ္ခံပါရေစ။ အခ်ိန္တန္လို. ပေးသိဖို. လိုလာရင်တော့ သိကြရမွာပါ။ျမန္မာနိုင်ငံပိုင် နည်းပညာဆိုတာ ၁၀၀ % သေခ်ာပါတယ်။ မအလျပုတ္က်ပြီး တိုင်ျးပည်ျပန္လည် ထူထောင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကူညီပေးဖို. စဉ်းစားထားပါတယ္တဲ့။
ဒီပညာရွင် ကူမယ္ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင္နှုန်း သေခ်ာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုတော့ မအလ ကို အျပုတ္တိုက္ဖို.သာ အားထည့္ထားကြပါလို.ျမန္မျာပည်ရဲ. လူဦးရေ အမ်ားဆုံး တောင်သူလယ်သမားမ်ားကို တိုက္တြန်းပါရေစ။
MRTV ကသတင်းဖတ်သူ မသင်းသင်းစိုးက လဲပြတ်သားစွာပြော လိုက်ပါပီ ( CDM ထက်ပိုကြမ်းတယ်နော်….)